Sunaami Kanariis ah oo u hanjabtay Mareykanka | Saadaasha Shabakadda
David melguizo | | Ciencia, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Muuqaalka hawada Isla de la Palma iyo Cumbre Vieja
Tiro aad u tiro badan oo daraasado ah oo ay sameeyeen ururo kaladuwan ayaa go'aamiyay jiritaanka halista dhabta ah ee soosaarida a tsunami jasiiradaha Canary ee gaari lahaa saameyn si weyn u Mareykanka, wuxuu baabi'iyaa xeebta Afrika wuxuuna si ba'an u saameeyaa qayb ballaaran oo ka tirsan Yurubta Yurub.
In kasta oo ay jiraan daraasado kale oo meesha ka saaray suurtagalnimadaas, haddana caddaynta cilmiga dhulka ayaa soo jeedinaysa in inta lagu guda jiro qarax mustaqbalka ee volcano-ka Cumbre Vieja ee jasiiradda La Palma, masiibo musiibo ah ay dhici karto iyadoo ay dhacdo dhumuc weyn oo u dhexeysa 150 iyo 500 km³ oo dhagax ah ilaa badda. Tani lafteedu waxay noqon laheyd dhacdo baaxad weyn, laakiin intaas dhaafsiisan, maxaa inaga dhigaya inaan ka hadalno baaxad weyn waa tsunami taasi waxay soo saari doontaa hoos u dhaca muggaas dhagaxyada ah ee badda ku dhacaya.
Cawaaqibta iyo caddaynta
Iyadoo la adeegsanayo tusaalooyin lagu qiyaasayo barakaca, baaxadda mowjadaha Sunaamiga ee soo saari lahaa go'doominta noocan ah (150-500 km³) xawaare dhan 100 m / s ayaa ka tallaabi kara badweynta Atlaantik oo dhan waxayna gaari kartaa xeebaha Waqooyiga Ameerika. leh isticmaalo ka dhex 10-25 mitir Xaaladda ugu xun.
Haddii mawjad cabbirkan ah ay dhacdo, gobollada sida Kariibiyaanka ama Florida si daran ayay u saameyn doontaa, sidoo kale magaalooyinka xeebta leh sida New York ama Boston. Koonfurta koonfurta jasiiradaha Ingiriiska iyo Jasiiradda Iberian waxay lahaan doonaan heer hoose oo saameyn ah, sababtoo ah qaab dhismeedka mawjada. Arrinta xeebta Afrika aad bay uga argagax badan tahay, maadaama ay gebi ahaanba burburi lahayd. The waxyeelada shaqsiyadeed iyo tan maadiga ahba waa wax aan la qiyaasi karin.
Taariikhda oo dhan, xaalado la mid ah ayaa lagu arkay jasiiradaha Canary. El Golfo, volcano ku taal dhinaca woqooyi ee jasiiradda of Hierro, waa tusaale. Samiir la helay ayaa suurtagal noqotay in la muujiyo a tsunami waxaa soo saaray dhicitaankii qayb ka mid ah fulkaanaha gulufkii ayaa gaadhay xeebaha Madeira (600 km dhanka galbeed ee Canaries) qiyaastii 15000 sano kahor. Guriga sababay Sunaamigan cabirkiisu aad buu u yaraa, sidaa darteed tsunami-ka ay soo saartay dhul-goyska La Palma wuxuu gaari karaa Mareykanka.
Macluumaad dheeraad ah - Taallada Xorriyadda waxay dib u dhigeysaa dib u furitaankeeda illaa iyo Luulyo 4 , Japan waxay sifiican ujirtaa nidaamkeeda digniinta tsunami , 4,9 dhul gariir ayaa gilgiley jasiiradda El Hierro
Xigasho - Bulshada cilmiga dhulka ee Ameerika, Xagal13
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Sunaami Kanariis ah wuxuu u hanjabayaa Mareykanka
Xarumaha cimilada, loogu talagalay taageerayaasha saadaasha hawada